मुक्तिनाथको ‘जीवन वरदान योजना’को तहल्का, एक महिनामा लक्ष्यको ५ गुणा बढी खाता खुल्यो ! Bizshala -
मुक्तिनाथको ‘जीवन वरदान योजना’को तहल्का, एक महिनामा लक्ष्यको ५ गुणा बढी खाता खुल्यो !
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले ल्याएको नौलो फिचरसहितको ‘जीवन वरदान बचत योजना’ले एक महिनामै निकै राम्रो व्यापार गरेको छ ।
बैंकका मार्केटिङ एण्ड कर्पोरेट अफेयर प्रमुख बसन्त बक्सीका अनुसार बैंकले यसअघि ल्याएका सबै खालको बचत योजनाको रेकर्डलाई तोड्दै यो नयाँ योजनाअन्तर्गत एक महिनाको छोटो अवधिमै ५ हजार हाराहारीमा खाता खोलिएका छन् ।
‘हाम्रो नयाँ प्रडक्टप्रति सर्वसाधारणले देखाउनुभएको अथाहा रेसपोन्सबाट हामी उत्साहित छौ ।’ उनले भने–‘एक महिनामा बढीमा १ हजार जतिले खाता खोल्लान् भन्ने लागेको थियो, तर सोचेभन्दा ५ गुणा बढीले खोल्नुभयो।’
तरलता अभावले ग्रस्त वित्तीय बजारमा जीवन वरदान बचत योजना के कारण सर्वसाधारणको रोजाईमा पर्यो होला त ? बक्सीले बिजशालासँग भने–‘लाइभ थ्रेटनिङ(मृत्यु हुनसक्ने) क्यान्सर रोगका लागि ५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमाको सुविधाका कारण सर्वसाधारणले यो योजनालाई मन पराइदिनुभएको हो । १० हजारको न्यूनतम बचतमा यस्तो सुविधा पाउने अपत्यारिलो स्किमका कारण समेत यो योजनामा सोचेभन्दा बढी रेसपोन्स आएको महसुस भएको छ।’
मुक्तिनाथ विकास बैंकले करिब एक महिनाअघि ल्याएको यो योजनाअन्तर्गत नेपालमै पहिलोपटक ल्याएको क्यान्सरविरुद्धको सुरक्षा योजनाले धेरैको ध्यान तानेको देखिन्छ । यो योजनाअन्तरगत बैंकले ग्राहकको ५ लाख रुपैयाँबराबरको बिमा गरिदिन्छ । यसअन्तर्गत तीनवटा बेग्लाबेग्लै बचत खाता छन् । पहिलो ‘जीवन वरदान बचत खाता’ हो, जसमा ५ लाख रुपैयाँको क्यान्सर बिमा योजना छ । यसका लागि न्यूनतम बचत १० हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ ।
त्यस्तै अर्को ‘जीवन बचत प्लस’ भन्ने खाता योजना छ । यसमा १० लाख रुपैयाँबराबरको दुर्घटना मृत्यु बिमाको सुविधा छ । यसमा क्यान्सर उपचारको बिमा छैन ।
यसरी, क्यान्सरविरुद्धका लागि एउटा र दुर्घटना मृत्यु बिमाका लागि अर्को खाता खोल्नुपर्छ । यो दुवै सुविधा पाउन चाहनेका लागि बैंकले ‘जीवन वरदान प्रिमियम खाता’ ल्याएको छ । यसमा दुवै सुविधा उपलब्ध छन् । तर, यसका लागि न्यूनतम मौज्दात २० हजार रुपैयाँ रहनुपर्छ । जम्मा २० हजार रुपैयाँ बचत राखेर खाता खोल्दा मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकले क्यान्सरविरुद्ध ५ लाखको कभर र १० लाख बराबरको जीवन बिमाको सुविधा पनि पाइरहेका छन् ।
कस्ताले पाउँछन् सुविधा ?
बैंकले ५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्यान्सरविरुद्धको बिमा पाउनका लागि केही शर्त भने राखेको छ । जसअनुसार खाता खोलेको ९० दिनपछि खातावाललाई क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो भने अस्पतालबाट प्रमाणित कागजात बैंकमा पेश गरेको एकहप्ताभित्र बिना झञ्झट खाताधारीलाई ५ लाख रुपैयाँ लाइभ थ्रेटनिङ टाइपको क्यान्सरको उपचारका लागि उपलब्ध गराउनेछ ।
यो स्किमले सहजै निको हुने क्यान्सरको रिस्क भने कभर नगर्ने बक्सीले प्रष्ट पारे । ‘पहिलो चरणमै थाहा भएका वा निको हुने क्यान्सरका लागि हामीले बिमा दाबी भुक्तानी गर्न सक्दैनौ, यस्ता क्यान्सरको उपचार ५० हजारदेखि १ लाखसम्ममै हुन्छ ।’ उनले भने–‘तर गम्भीर चरणमा पुगेको सबै प्रकारको क्यान्सरको बिमा भुक्तानी हुन्छ ।’
गम्भीर प्रकृतिको क्यान्सर लागेको थाहा भएपछि सुरुवाती चरणको उपचारमै ८–१० लाख खर्च हुने र यस्तो अवस्थामा खातावालले बैंकको तर्फबाट ५ लाख पाउँदा यसले राम्रै काम गर्ने देखिन्छ ।
अन्य सुविधा के–के छन् ?
यस्तो बचत खाता खोल्दा वार्षिक ७ प्रतिशतको दरले ब्याज पनि पाइन्छ । ब्याजको भुक्तानी मासिक रुपमा हुन्छ ।
बैंकले जारी गरेको भिसा कार्ड प्रयोग गरी नेपालका जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटिएमबाट रकम निकाल्दा पनि त्यसमा अतिरिक्त शुल्क लाग्दैन । त्यस्तै एटिएम कार्ड पनि पहिलो वर्ष निःशुल्क गरिएको छ ।
त्यस्तै मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङलगायतका सुविधा पनि निःशुल्क गरिएको छ । लकरमा समेत बैंकले विशेष छुट दिनेछ ।
मुक्तिनाथका पुराना खाताधारीले पनि यो सुविधा पाउने बक्सीको प्रष्टोक्ति छ । उनअनुसार मुक्तिनाथ बैंकमा बचत खाता खोल्ने पुराना खाताधारीले समेत यो सुविधा पाउनेछन् । तर, उनीहरुले आफ्नो पुरानो खातालाई बदलेर अहिलेको स्किममा रुपान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
बैंकको हाल देशभर १२० शाखा रहेका छन् । जुनसुकै शाखाबाट पनि यो बचत खाता खोल्न सकिने व्यवस्था बैंकले गरेको छ ।
बक्सीले यो प्रडक्ट बन्द नहुने र निरन्तर रहने उल्लेख गर्दै छोटो समयमै लोकप्रिय बनेको यो बचत योजनाका कारण बैंकको पोर्टफोलियो समेत मजबुत बनेको दाबी गरे ।